Macallinka Atletico Madrid ee Diego Simeone oo sheegay inuu isku dayay lasoo saxiixashada Messi kahor inta uusan ku biirin PSG & Suarez oo… – Gool FM
Macallinka Atletico Madrid ee Diego Simeone oo sheegay inuu isku dayay lasoo saxiixashada Messi kahor inta uusan ku biirin PSG & Suarez oo…
(Madrid) 13 Okt 2021. Markii ay Barcelona go’aansatay inaysan heshiiska u kordhin kabtankeedii hore ee Lionel Messi, waxaa kooxaha lala xiriirinayay ugu waaweynaa Manchester City iyo Paris Saint-Germain, hase ahaatee, Macallin Diego Simeone ayaa sheegay inay Atletico Madrid isku dayday saxiixiisa.
Macallinka dhalashada Argentina la wadaaga Messi ayaa daaha ka rogay inuu howl-galkan u diray weeraryahanka naadiga Atletico ee Luis Suarez.
“Wax ayaan idiin sheegayaa, markii ay waxaas dhacayeen, waxaan wacnay Luis Suarez oo aan xushmad waxaan ahayn u hayn” ayuu Simoene u sheegay majaladda Ole.
“Ma aanan wicin Leo (Messi), waxaan wacay Luis, waxaan weydiiyay sida uu (Messi) ahaa, waxa uu ku fikiray iyo haddii ay jirto fursad fudud oo uu ku imaan karo Atletico.
“Balse isku daygaas ma uusan dhaafin saddex saacadood, Paris Saint-Germain ayaa si xoog leh u dooneysay inay keensato” ayuu hadalkiisa raaciyay tababaraha Los Rojiblancos.
Si kastaba ha ahaatee, Macallin Diego Simeone ayaa dadaallo badan u sameynaya inuu si walba u xoojiyo safka Atletico Madrid isagoo xagaagii hore soo qaatay Luis Suarez halka uu xagaaganna la siixday Antoine Griezmann, balse riyadii uu Messi ku maamuli lahaa uma aysan hirgelin.